Aafno Khabar | Trusted Online News Protal of Nepal निषेध आदेश मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाको पेटको आगो निभाउन सरकारका योजना के छन् ? | Aafno Khabar
निषेध आदेश मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाको पेटको आगो निभाउन सरकारका योजना के छन् ?
केही अघि प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा गरेको ध्यानाकर्षणमा भनेको थियौँ काठमाडौं उपत्यका लगायत केही हटस्पटहरूमा २ हप्ता कडाइ गरौं, तर यो अवधिमा जनतालाई घरमा राखेर सरकार नसुतोस्। सम्भाव्य जोखिम आंकलन गरेर युद्धस्तरमा अस्पताल केन्द्रीत लगायत सम्पूर्ण तयारी यसै समयमा गरेर २ हप्तापछि जनजीवन सहज बनाउन सक्नेगरी गर्नुपर्ने काम यो अवधिमा गर्नुपर्छ ।
अब त हुँदाहुँदा सरकारले रोग र भोकबाट आहत नागरिकलाई सीडीओ र प्रवक्ताको भरमा छोडिदिन थालेको छ, यो रोकियोस्। सीडीओ र प्रवक्ताको पछाडि लुकेर बसेको राजनीतिक नेतृत्व दुलोबाट निस्केर नागरिकसँग संवाद गर्ने हिम्मत गरोस् । अनेकन समस्याका बावजुद सीडीओको आदेश मानेर आम नागरिक घरभित्र बसिरहँदा, सरकार के गर्दै थियो त्यो बताओस् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के के तयारी भयो ?
संक्रमितको संख्या थपिँदा उपचार गर्न सक्ने क्षमता कति बढ्यो ? काम नै नगरिरहेको रेस्पोन्स सिस्टमलाई कहाँ कहाँ बदलियो ? केके गर्दै जाने योजना छ ? लकडाउन र निषेध आदेश कसरी उपयोग गर्ने सोचेको, वा लकडाउन गरिरहने सोच हो ?
सरकार, हामीलाई बताउ कि, तिम्रो आदेश मानिरहँदा चुलो बन्द भएकाहरुको पेटको आगो निभाउन तिम्रा के के योजना छन् ? बहाल तिर्न नसकेर बेघर भएकाहरुलाई छानो दिन तिमी केके गर्दैछौ र कहिलेसम्म गर्दैछौ ? बाध्य भएर रोजगारीबाट बेदखल भएका बेरोजगारहरुलाई फेरी रोजगारीमा फर्काउन तिम्रा योजना केके छन् ?
– कांग्रेस नेता थापाले बुधबार फेसबुकमा सार्वजनिक गरेको धारणा
प्याजको बिक्रि मूल्य तोकियो